Baarlamaanka dalka Itoobiya Oo fadhi Deg deg ah La Iskugu Yeedhay. – Xeernews24
27. Februar 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Baarlamaanka dalka Itoobiya Oo Degdeg La Isugu Yeedhay
Baarlamaanka Waddanka Itoobiya ayaa kulan degdeg ah oo aan caadi ahayn lagu wargeliyay kaas oo la qorsheeyay in uu qabsoomo Jimcaha soo socda sida ay ku warrantay warbaahinta Itoobiya sida wargeyska Addis Standard iyo wakaaladda Fana.
Xogaha hordhaca ah ee kulanka laga helayo ayaa sheegaya in qorshuhu yahay in goluhu meelmariyo iscasilaadii ra’isal wasaare Hailemariam Desalegn, islamarkaana ansixiyo ra’isal wasaare cusub. Waxa la filaya in isbahaysiga talada haya Khamiista doorto ra’isal wasaare cusub kaas oo lagu ayidi doono kulanka baarlamaanka.
Todobaadii u dambeeyay afarta xisbi ee ku bahoobay xisbiga talada haya ayaa hoggaankooda wax ka bedelayay waxaana isbedel dhinaca hoggaanka ku sambeeyay xisbiga Oromada oo Dr Abiy Axmed Cali u doortay guddoomiye iyo xisbiga bulshooyinka koonfurta oo guddoomiye iyo kuxigeen u kala doortay xoghayihii xisbiga isbahaysiga talada haya iyo wasiirka difaaca Mr Siraj Fegasa.
Xubnahan cusub ayaa la filaya in ay noqdaan kuwa ku loolamaya jagada ra’isal wasaaraha oo loo badinayo in Oromada loo dhiibo maaddaama ay qalalaase wadeen muddooyinkii u dambeeyay.
inkastoo warar kalena tibaaxayaan in qowmidda Tigreega oo laba garab uu kala jooga ay ka biyo diidan yihiin in nin Oroma ah xilka looga dambeeyo.
Raysal-wasaare Khayre iyo wafdigiisa oo lagu soo dhoweeyey dalka Imaaraadka... DAAWO Barnaamij Xiiso badan oo uu Wargayska Washiton post ka diraariyay Dekada...